စိတ်ပညာရှင်အချို့ကလိင်တူချစ်သူများကိုလက်ခံခြင်းသည်လိင်တူဆက်ဆံသူများကိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစည်းကမ်းမဲ့ရောဂါ - Your Brain On Porn
တချို့ကစိတ်ပညာရှင်လိင်တူချစ်သူလက်ခံမှုလိင်တူဆက်ဆံ obsessive compulsive ရောဂါ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှောင့်နှေးခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်စတီဗင်ဘရော့ဒစ်စ်ကစွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲစေနိုင်သောရောဂါအထူးပြုသူတစ် ဦး သည်ဖောက်သည်များအား“ လက်တဆုပ်စာ” ရှိပြီးတခါတရံတွင်သူတို့ကလိင်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်းသံသယရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မိမိအများ၏လက်တွေ့ညွှန်ကြားရေးမှူးသူသည် Brodsky, နယူးယော့နှင့် NJ ၏ OCD နှင့်ထိတ်လန့်ရေးစင်တာသူကဒါကြောင့်သူလွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသူ၏မိဘများနှင့်အတူနောက်ကျောမှာရွှေ့ဖို့ခဲ့လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအတှေးအနေဖြင့်ချိခဲ့သူတဦးတည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာခဲ့ဟုဆိုသည်။ Brodsky သူသည်မိမိလူနာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ် OCD ခဲ့ဆုံးဖြတ်သည်ဟုဆိုသည်။
"သူကဂန္ထဝင်အမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်" ဟု Brodsky ကဆိုသည်။ သူဟာသူ့ကိုအခြားယောက်ျားတွေနဲ့ဆွဲဆောင်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
ဤသည်စိတ်ရှည် Brodsky သည်နှင့်အညီ, ဖြောင့်ခဲ့ပေမယ့်သူသည်မိမိအပြုအမူအတွက်မဆိုခက်အဖြစ်မှန်ပေါ်အခြေမခံခဲ့ကြသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတှေးအရှိခဲ့ပါတယ်။
Brodsky ကယခင်ကုသမှုခံယူသူတစ် ဦး သည်သူ၏လူနာကိုလိင်တူချစ်သူအဖြစ်မှားယွင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူနာ၏တောင်းဆိုချက်အရသူ့အား လျှော်ကြေးကုထုံး, ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မယ့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာနည်းလမ်း။
“ ငါ၌လိင်တူချစ်သူဖောက်သည်များစွာရှိပြီး phobia သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးဖြစ်သည်” ဟုသူကပြောသည်။ ငါသူတို့ကိုကူညီမယ့်သူလိုပဲဆက်ဆံတယ်။ သူတို့နဲ့ငါ့ဖောက်သည်တွေအားလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုပျော်တယ်။
ဒါပေမယ့်သူကလူနာသင့်လျော်မယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုထက်သူစိတ်ရောဂါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးပြောပါတယ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အကျပ်အတည်းအတွက်အကြံပေးခြင်းခံယူနိုင်အောင်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ OCD ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုလိုအပ်လို့ပြောပါတယ်။
OCD ဒီအမျိုးအစားက Jeff Szymanski သည်တစ်ဦးလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသည်နှင့်အညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive ၏အမျိုးအစားအောက်တွင်ကျရောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ OCD ဖောင်ဒေးရှင်းမှ။
"ငါသည်ဤအကြိမ်ပေါင်းများစွာကုသခဲ့ကြ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒီတစ် ဦး ချင်းစီရောဂါဗေဒသံသယခံစားနေကြရသည်။ သူတို့ကလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘဲ ၁၀၀ ရာနှုန်းဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်တယ်၊ ဥပမာ၊ သူတို့က 'ငါကောင်လေးကိုအ ၀ တ်ခန်းထဲမှာကြည့်နေတဲ့အချိန်တစ်မိနစ်လောက်စောင့်ပါ။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?' သူတို့ကသိရန်လိုအပ်သည်။ သေချာဖို့လိုသည်။
Szymanski ကသူကုသပေးခဲ့သည့်ရောဂါများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းတွင်လူနာသည်ရှင်းနေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တခါတရံမှာလူတယောက်ဟာသူတို့ကလိင်တူချစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ "ငါစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါစိတ်ဝင်စားမယ်၊ မင်းလိင်တူချစ်သူဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲ"
သူကစွဲလမ်းမှုသည် "OCD ကမ္ဘာတွင်လုံးဝတွေ့ရလေ့ရှိသည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အထွေထွေကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့် ဆက်သွယ်၍ ဤကဲ့သို့သောအရာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဘုရားသခင်အားတိုင်တည်။ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သူတစ် ဦး ဦး အားပြောပြပါက 'ဒါကထူးဆန်းနေတယ်' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအထူးကုဆရာဝန်တွေကိုအစဉ်မပြတ်တွေ့မြင်တယ်။
Brodsky မှစောဒကတက်သည်မှာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူတို့၏ဘဝပုံစံကိုလူသိရှင်ကြားလက်ခံခြင်းသည်ဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားများကဲ့သို့သောစိတ်သောကရောက်စေသည့်ဤရောဂါမျိုးကိုကုသသူများအားမျက်စိကန်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုသည် ကုထုံးပညာရှင်များသည်လူနာတစ် ဦး သည်ဗီရိုထဲမှထွက်ပေါက်ရှာရန်နှင့်သူ့ကို“ ထွက်၍ စမ်းကြည့်ရန်” ကူညီနေသည်ဟုချက်ချင်းကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည်။
ဒေါက်တာဂျက် Drescherလိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်တူချစ်ခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး OCD အတွက်လူနာများကိုကုသပေးသောနယူးယောက်စီးတီးစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး က“ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်တာကလိင်တူချစ်သူဖြစ်တာနဲ့မတူဘူး” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
DDSCHER က Drescher ကလိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူကိုလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်စေ၊ လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူဖြစ်စေလိင်တူချင်းချစ်တာကိုလိင်တူချင်းချစ်တာ၊ လိင်တူချင်းချစ်တာ၊ အကယ်၍ သူသည်လိင်တူသူများကိုအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိပါက၊ လိင်တူဆက်ဆံသူများ၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မပြုလုပ်ပါ၊ လိင်တူချင်းလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုအမှန်တကယ်နှိုးဆွပေးခြင်းမပြုပါက၎င်းသည်သူ၌လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ရန်ခက်ခဲသည်။ တိမ်းညွတ်။ "
Drescher သည်အခြားစိတ်စွဲလမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာအကြံအစည်များဖြင့်လူနာများကိုကုသခဲ့သည်။ "သူကကလေးများကဘယ်တော့မှမနှိုးဆော်ခဲ့ဖူးသော်လည်းလူနာတစ် ဦး သည် pedophile ဖြစ်ရန်စိတ်စွဲလမ်းခဲ့သည်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ပြီးသူမှာအိပ်ချ်အိုင်ဗွီရှိနေတယ်လို့ကြောက်တယ်။
သူကအချို့သောကုထုံးများသည် OCD ရောဂါကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်ဟု Brodsky နှင့်သူသဘောတူခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အများအားဖြင့်သူတို့ကလိင်တူချစ်သူများကိုထောက်ခံကြောင်းမဟုတ်ဘဲ OCD ၏လက္ခဏာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။
OCD အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း အရာရှိလူများကသူတို့ကိုအပြစ်ရှိဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးသည်နှင့်အညီ, တစ်နိုင်ငံလုံး 2.2 လူဦးရေသန်းထိခိုက်, အထပ်ထပ်တစ်ခုခု (compulsive) လုပ်ဖို့မောင်းနှင်ခံစားရစေထပ်တလဲလဲနှင့်မလိုချင်တဲ့အတွေးများနှင့်အတွေးအခေါ်များ (obsessive) ရှိသည်။ ပုံမှန် obsessive ပိုးမွှား, အန္တရာယ်သို့မဟုတ်တားမြစ်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအတှေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပါဝင်သည်။
Brodsky ကလိင်တူချစ်သူတစ် ဦး သည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့် OCD ရှိသူနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
“ OCD ရှိသူတစ် ဦး က“ စဉ်းစားတာကိုမရပ်နိုင်ဘူး၊ “ အတိတ်ကအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်ချဖို့တောင်းခံခြင်း၊ လိင်တူချစ်သူများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊
Brodsky က“ သူတို့ဟာလိင်တူချင်းကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်တွေကိုသူတို့နှစ်သက်ကြပေမယ့်တစ်နေ့လုံးစားသုံးခြင်းခံရတယ်ဆိုတာသူတို့သိပါတယ်။ "သူတို့ကတခြားဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဟာဒီစစ်ပွဲကိုမဖြတ်သန်းဘူး
Ross က Murray သည်လိင်တူချစ်သူထောက်ခံအားပေးမှုအုပ်စုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် GLAADသူက OCD ၏ဤအမျိုးအစားတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး, ဒါပေမယ့် Brodsky အသိကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
"ဒါဟာအတိအကျ phobia သို့မဟုတ်မြွေကိုကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏" ဟုသူကပြောသည်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမျိုးကိုဘယ်သူမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။
"လိင်တူချစ်သူပေမယ့်ဗီရိုထဲမှာတစ်စုံတစ်ယောက်, သူတို့ကိုယ်သူတို့သုတေသနနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအချိန်ဖြုန်းမဟုတ်ပါဘူး" ဟုသူကပြောသည်။ "သူတို့ကသူတို့အစိတျအပိုငျးနက်ရှိုင်းသောဆင်းသိကြ၏။ လိင်တူချစ်သူတွေဟာပြင်ပမှတရားဝင်အတည်ပြုမှုမျိုးကိုမရှာဖွေကြဘူး။
လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ခုစွဲထားရှိခြင်းသည်အခြားမည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းထဲကနေမျှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, Brodsky ကဆိုသည်။
Brodsky က“ သူတို့ဖတ်တာ၊ ကြားတာတစ်ခုခုကအစပိုင်းမှာအစပျိုးတယ်။ "သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောမယ်၊ သူတို့က 'ဂေး၊ ငါကလိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်လိုလုပ်ပေးတာတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်" လို့သူတို့ထင်ကြတယ်။
သူတို့သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏လှုံ့ဆော်မှုခံရသည့်သိမ်မွေ့သောခန္ဓာကိုယ်အာရုံခံစားမှုများကိုပင်ရရှိနိုင်သည်။ “ ဒါကသူတို့ကိုလိင်တူဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး။ "လူတ ဦး ကိုနှိုးဆွရန်ဘာမျှမနီးပါးကြာပါတယ်။ "
Brodsky ၏အဆိုအရဤစွဲလမ်းမှုအတွေးများသည် homophobia တွင်အမြစ်တွယ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ “ ဒါကလိင်ဆက်ဆံမှုတောင်မှဒါကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကကလေးတစ်ယောက်လိုနှိပ်စက်ခံရတာ၊ သူတို့ရဲ့ဘဝမှာသူတို့ကိုချစ်ခင်ကြင်နာစွာဆက်ဆံမှုကိုတားဆီးတဲ့အခြားပြareနာတွေရှိပါတယ်။ ”
ကုသမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Brodsky ကသူသည်လိင်တူချစ်သူတ ဦး အားသူတို့၏ခံစားချက်များကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နှင့်စိတ်အေးဆေးငြိမ်သက်မှုကိုရရှိရန်ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသည်ထိတွေ့မှုကုထုံးကိုအသုံးပြုသည့် OCD ကုသမှုနည်းလမ်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု (သို့) မိမိကိုယ်ကိုဗဟုသုတရှိခြင်းသည်အမှန်တရားနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အကြောက်တရားများနှင့်သံသယများကိုသင်အကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ရပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုမရ၊
ဤလူနာများကိုအခြား OCD ပုံစံများကုသသည့်နည်းတူအောင်မြင်စွာကုသနိုင်သည်ဟု Brodsky ကဆိုသည်။ ဒါကလွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်။
Brodsky ၏အဆိုအရစွဲလမ်းရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုမည်သည့်အခါမျှအဖြူနှင့်အဖြူမရှိဟုဆိုခဲ့သည်။ "ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရမယ်။ OCD နဲ့လိင်တူချင်းကိုတကယ်ဆွဲဆောင်တဲ့သူနဲ့ကွာခြားချက်ရှိတယ်။ "
ဤဆောင်းပါးနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များ - Drescher ၏မှားယွင်းသောထင်မြင်ချက်ကိုပြင်ခြင်း
Sex-orientation OCD သည်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ယနေ့အင်တာနက်ပေါ်မှအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားနည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချစ်သူများအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာများသည်များသောအားဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလိင်တူချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။
လူအများစုကညစ်ညမ်းသောအဖွင့်အပိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်အချိန်အတန်ကြာအနားယူပြီးနောက်သူတို့သည်“ အလွန်အစွန်းရောက်သောအရာတစ်ခုခု” သို့ထွက်သွားရန်မကြာခဏပြောဆိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ကမစဉ်းစားဘူး၊ အဲဒါက orgasm ကိုပိုမိုအားကောင်းစေတဲ့ (စိုးရိမ်စိတ်၊ ၎င်းသည်မရည်ရွယ်ဘဲ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအထွတ်အထိပ်နှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်များသည်နာတာရှည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုမှအလွန်အမင်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အပိုဆန်းသစ်မှု (လှုံ့ဆော်မှု) လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်မောင်းနှင်ပုံရသည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်သည်းခံနိုင်မှုကိုပြသခြင်း (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှု) ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအားလုံး၏ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုကြားခဲ့ကြသောကြောင့်၊ ညစ်ညမ်းမှုမှထွက်သွားသည့်သတင်းများသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်သူတို့၏အရသာများသည်အင်တာနက်မတိုင်မီကညစ်ညမ်းအရသာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုဆိုသည် ကြည့်ပါ သင်ကသင့်ရဲ့ဂျွန်ဆင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား?
အဆိုပါအချက်ကြောင့် သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုသို့မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်းသည်ပိုက်ကွန်ကိုလှည့်လည်စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။။ OCD လေ့လာသူများက“ သေချာ” ချင်သောကြောင့်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိပုံရသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့မလိုချင်သော ဦး နှောက် (ပြန်လည်) ဝါယာကြိုးထဲသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေသည့်ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Drescher နှင့်သဘောမတူရပါက“ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းဟာသူတို့လိင်တူချစ်သူများကိုဆိုလိုသည်။ ” ၎င်းတို့သည်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေနေစဉ်အတွင်း၎င်းတို့ထဲသို့ကျသွားပြီး“ စမ်းသပ်” ပါကထိုအရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ညစ်ညမ်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအစတွင်သုံးစွဲသူများ၏အရသာသည်သူတို့၏နောက်ခံကိုကောင်းကောင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။
အများဆုံးကသူတို့ကိုကူညီပေးသည်သောအရာစမ်းသပ်ခြင်း, ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အာမခံရှာကြံရပ်တန့်ခြင်းနှင့်, ရှိသမျှအထက်, လအားလုံးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကသူတို့နေသောထုတ်တွက်ဆ။ ဆုတ်ခွာစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုးရွားလှသောဥပဒေဖြစ်ပြီး, အမှန်တကယ်ပတ်ပိုဆိုးရရှိသွားတဲ့ကြောင့်ကြားဖြတ်အစိုးရများတွင်အချို့သောအမှန်တကယ် meds လိုအပ်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအကြားပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေလိုသည်။ ကြည့်ရှုသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်အင်္ဂါများပါ ၀ င်သောအမျိုးအစားအသစ်များသို့လှိုင်းတက် / အရှိန်မြှင့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ “ သင်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာ” ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာလိင်မှုဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အလွန်ပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။
ဤသည်ကိုဆိုလို တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်မှကြွလာသောအခါအလွန်အထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ပါတယ်။ Ogas နှင့် Gaddam သာ3လကြာအသုံးပြုသူများသည်နောက်တော်သို့လိုက်, ဒါသူတို့ပုံလုံးဝဤဖြစ်ရပ်ဆန်းလွဲချော်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့ရဲ့ဒေတာ surfing-စဉ်-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဤအန္တရာယ်များအမျိုးအစားမတိုင်မီအကြီးအကျယ်ကိုစုဝေးစေခဲ့ပါတယ် (အသစ်တွေကိုမှ arousal အားဖြည့်) အမြားအဖြစ်လာခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်မှုသည်“ လိင်မှုကိစ္စအားအမှန်တကယ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရန်အင်တာနက်အကြံဥာဏ်ကိုအသုံးပြုပါ” ဟူသောအကြံပြုချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာငယ်ရွယ်သူများအတွက်အထူးသဖြင့်သစ္စာဖောက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အင်တာနက် porn မှထွက်ပြီးနောက်တွင်လိင်မှုကိစ္စမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသူတို့ပိုမိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။